Zoom Camera Module၊ Digital Block Camera Modules - Viewsheen
IP Zoom Camera Modules
4MP Zoom Modules များ
2MP Zoom Modules များ
Ultra Long Range Zoom
ပုံမှန် Range Zoom
Drone Zoom Camera Modules
Dual Sensor Thermal Modules
1280 အပူပိုင်း မော်ဂျူးများ
640 Thermal Modules
၃၈၄ အပူပိုင်း မော်ဂျူးများ
ဒရုန်း Gimbal ကင်မရာများ
4K Zoom Gimbals
Dome PTZ ကင်မရာများ
80X High Definition 15~1200mm Long Range Zoom B...
Dual Sensor Network အတွက် Thermal Imaging Module...
အရည်အသွေးမြင့် Zoom Camera Module 90X 6~540mm 2MP...
58X 6.3~365mm HD IP Long Range Zoom Camera Modu...
50X Optical Zoom 4K Ultra HD IP လုံခြုံရေးကင်မရာ...
58X OIS 6.3~365mm 2MP Network Long Range Zoom...
35X Zoom နှင့် 640*512 Thermal Bi Spectrum Dual S...
Uncooled VOx 1280*1024 ထိတ်လန့်မှုကွန်ရက် အပူရှိန်...
80X 15~1200mm 2MP Network Ultra Long Range Zoom...
90X 6~540mm 2MP Network Long Range Zoom Block...
86X 10~860mm 2MP Network Ultra Long Range Zoom...
42X 7~300mm 2MP Network Long Range Zoom Block C...
အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်သနည်း။
ကြွယ်ဝသော R&D အတွေ့အကြုံ။ အဓိကအဖွဲ့သည် ပျမ်းမျှအတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ဖြင့် နာမည်ကြီး လုပ်ငန်းများမှ လာပါသည်။
ပြီးပြည့်စုံသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စနစ်၊ စံသတ်မှတ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့သည် ထုတ်ကုန်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေသည်။
ဖောက်သည်ဗဟိုပြု၊ OEM / ODM ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
IP zoom ကင်မရာ ချိတ်ဆက်နည်း...
View sheen ၏ zoom ကင်မရာ modules များကို သင်လက်ခံရရှိသောအခါတွင် ကြိုးများနှင့် RS485 အမြီးဘုတ်အုပ်စုသုံးစုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။(RS485 tail board သည် အများအားဖြင့် zoom camera module တွင် တပ်ဆင်ထားသည်...
UAV/Drone Zoom Block ကင်မရာ...
View Sheen သည် UAV သို့မဟုတ် ဒရုန်းအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော Zoom Block ကင်မရာကို တီထွင်ခဲ့သည်။CCTV အတွက် ဒရုန်း zoom ကင်မရာ module နှင့် zoom block ကင်မရာ အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။1. ဗီဒီယို de...
Optical Zoom နဲ့ Di...
zoom ကင်မရာ module နှင့် infrared thermal imaging camera system တွင် zoom mode နှစ်ခု၊ optical zoom နှင့် digital zoom တို့ရှိသည်။နည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံးသည် အဝေးမှ အရာဝတ္ထုများကို စောင့်ကြည့်သည့်အခါ ချဲ့ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။အမြင်ဆိုင်ရာ...
ကမ်းရိုးတန်းကာကွယ်ရေး နှင့် uav ဆန့်ကျင်ရေး ကဲ့သို့သော တာဝေးစောင့်ကြည့်ရေး အပလီကေးရှင်းများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကီလိုမီတာ 20 အကွာအဝေးရှိ လူများနှင့် ယာဉ်များကို ထောက်လှမ်းရန် လိုအပ်ပါက၊ မည်သို့သော အပူပုံရိပ်ဖော်ကင်မရာသည် ...
ကမ်းရိုးတန်းကာကွယ်ရေး သို့မဟုတ် UAV ဆန့်ကျင်ရေးကဲ့သို့သော တာဝေးအကွာအဝေးစောင့်ကြည့်ရေးအက်ပ်များတွင် UAV များ၊ လူများ၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့် သင်္ဘောများကို3ကီလိုမီတာ၊ 10 ကီလိုမီတာ သို့မဟုတ် 20 ကီလိုမီတာတွင် ထောက်လှမ်းရန် လိုအပ်ပါက၊ မည်သည် ...
© မူပိုင်ခွင့် 20162021 All Rights Reserved.
Max Optical Zoom ကင်မရာ zoom ကင်မရာ module အပူချိန်ကင်မရာ Long Zoom Camera 30x Zoom Camera Mdule Network Zoom Camera Module